यो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सको सदस्य समेत रहेको छ । यस संस्थाले स्थापना पश्चात आजसम्म आई पुग्दा पुष्प व्यवसायको क्षेत्रमा धेरै बिकास गर्न सकेको छ । एक दशक अघाडीसम्म बिदेशी फूल बिरुवामा निर्भर रहने गरेकोमा हाल आएर आन्तरिक मागको झन्डै ८० प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले पुरा गर्न सकेको छ । ....
यस संस्थाले बिभिन्न फूल बिरुवाहरुको खेती प्रबिधी, फूल सम्बन्धि भएका बिभिन्न अध्ययन अनुसन्धान प्रतिबेदन, बजार सुचना तथा लेख रचनाहरु प्रकाशन गर्दै आएको छ । संस्थाबाट फूल सम्बन्धि प्रकाशित प्राबिधीक पुस्तक तथा अध्ययन प्रतिबेदनहरु अनुसन्धान कर्ता, संघ संस्था, बिद्यार्थी, पुष्प उत्पादकहरू, थोक व्यापारीहरू, रिटेलरहरू साथै विद्यार्थी र शोधकर्ताहरु सहित सदस्यहरूको लागि उपयोगी हुने छ । संस्थाबाट प्रकाशित केहि पुस्तकहरु यस वईभसाईटमा समेत राखीएको छ ।
फ्यानको एक कार्यकारी समिति हुन्छ । उक्त समितिमा बार्षिक साधारण सभाबाट चुनियर आएका १४ सदस्यीय कार्यकारी पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरु रहन्छन । फ्यानको कार्यकारी समिति एक अभिछिन्ना उत्तारधिकारवाला एक निकाय हो जसले पुष्प व्यवसायको नीति निर्माण तहमा कार्य गर्ने गर्दछ । सबै कार्यकारी सदस्यहरू स्वयंसेवक आधारमा सदस्य रहेको हुन्छन। फ्यानको एक प्रमुख कार्यकारी अधिकारी रहन्छ जो कार्यकारी समितिको बैठकद्वारा अनुमोदित कार्यक्रमहरुको कार्यन्वयन तथा सम्पादन गर्दछ।
यस संस्थाको लक्ष्यीत वर्ग भनेकै पुष्प व्यवसायी सदस्यहरु हुन । पुष्प व्यवसाय गरि रहेका सदस्यहरु (नर्सरी, कट फ्लावर उत्पादक, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता, आपुर्तीकर्ता आदि) को हितका लागि बिभिन्न प्रबद्र्धनमुलक, बिकासमुलक कार्य गर्दछ । पुष्प व्यवसायको दिगो बिकासका लागि बिभिन्न बिकासमुलक, प्रबद्र्धनमुलक कृयाकलापहरु गर्दैै आएको छ ।
संस्थाले पुष्प पुष्प व्यवसायी सदस्यहरूको हीतको लागि काम गर्दछ । पुष्प व्यवसाय सम्बन्धि सूचना प्रबाह संस्थाले यसको सदस्यहरु र विभिन्न गतिविधिहरु मार्फत जानकारी गराउने गर्दछ। साथै बिभिन्न प्रतिबेदन तथा पुस्तकहरु प्रकाशन गरी सु–सुचित गर्ने गर्दछ ।
फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालको २०४९ साल कार्तिक ३० गते समग्र नेपाली पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पुष्प व्यबसायमा संलग्न १० जना संस्थापक सदस्यहरुको सहयोगमा स्थापना भएको एक मात्र नेपाली पुष्प व्यवसायीहरुको छाता संगठन हो
नेपालको पुष्प व्यवसायको बिकास तथा प्रबद्र्धनको माध्यमबाट दिगो राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था बृद्धिमा सहयोग पु¥याउनु
ध्येय वा गन्तव्य (Mission)
नेपाली पुष्प व्यवसायको क्षेत्रलाई बढाउन को लागी पुष्प उद्यमीकर्ताहरु तथा पुष्प व्यवसायको समग्र विकास गरेर विश्वव्यापी रुपमा प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।
ADMINJanuary 6th, 2019
तत्कालिन शाही वनस्पति उद्यान, गोदावरीले वि.सं. २०५३ सालदेखि गर्दैै आएको गोदावरी फूलको प्रतियोगितात्मक प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला बि.सं.२०६४ देखि २०७० सालसम्म कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम,...
ADMINNovember 30th, 2017
असोज २१ गते २०७४, काठमाडौं । फलोरिकल्चर एसोसिएसन नेपाल फ्यानको अगुवाईमा मिति २०७४ असोज २१ गते काठमाण्डौंको रुद्रमती नदी (धोबीखोला) को सरसफाई सहित आफैले लगाएका बोट...
नागार्जुन–३, काठमाण्डौ नेपाल
Thashikhel-5, Lalitpur, Nepal
ADMINApril 26th, 2020
Click below for Form download: 1. COVID-19 impact on Floriculture data collection...
२३ औं फ्लोरा एक्स्पो २०७६ हुने सम्बन्धि सुचना
ADMINNovember 24th, 2019